UMBULALI WASENORTHERN CALIFORNIA ULINDELE INGQAWULE; INTOMBI YAKHE IYAKUCHASA UKUKHULULWA - IINDABA
Umbulali waseNorthern California ulindele ingqawule; intombi yakhe iyakuchasa ukukhululwa
UJenn Carson uthi ukholelwa ukuba utata wakhe, omnye weSan Francisco Witch Killers, angabulala kwakhona xa ekhululwe.
Ukhumbula utata wakhe ebrasha iinwele zakhe emenzela isidlo sakusasa.
Ihlabathi laliza kumazi njengoMichael Bear Carson, umbulali olandelanayo. Kuye, wayengutata wekhaya. Ngasekupheleni kweminyaka yoo-1970, uJenn Carson wayesazi uyise njengomfundisi-ntsapho wesikolo, indoda ekrelekrele eyayithetha iilwimi ezintathu kwaye inesidanga sekholeji kwiYunivesithi yase-Iowa.
Xa uJenn wayeneminyaka emi-5 ubudala, yena nomama wakhe, uLynne, babaleka ePhoenix baza bazimela eOrange County kuba babesoyika into eyayinokwenziwa nguMichael nomfazi wakhe omtsha uSuzan. Ngo-1983, uMichael noSuzan bavuma ukuba babulala abantu abathathu (kwaye barhanelwa kumatyala ali-12 angekasonjululwa). Babizwa ngokuba ngababulali bobugqwirha baseSan Francisco ngamajelo eendaba emva kokuba besithi bazama ukususa amagqwirha ehlabathini.
NgoLwesithathu, nge-27 kaCanzibe, uMichael Bear Carson, ngoku oneminyaka engama-69 ubudala, uya kuba nengxoxo yengqawule evela kwiNtolongo yeLizwe yaseMule Creek, apho adonse izigwebo ezithathu zobomi obungama-25. Ityala liza kujongwa kwiZoom ngamalungu osapho lwamaxhoba angakwaziyo ukuya ngenxa yokuvalwa kwe-coronavirus. Ufumana ukuviwa ngenxa yeNkqubo yeNgqawule yaBadala yaseCalifornia yamabanjwa angaphezu kweminyaka engama-60 ubudala kwaye achithe ngaphezulu kweminyaka engama-25 entolongweni.
Andiziva kukhuselekile ukuba akhululwe, utshilo uJenn Carson, 45, waseRiverside. Ndicinga ukuba uza kubulala kwakhona ... Awujongani nokuvalelwa kwabantu abaninzi ngokukhulula ngaphantsi kwe-1% yamabanjwa angababulali abaninzi. Utata wam, uMichael Bear Carson. bazingelwa abantu, abatsha abahle abangamaxhoba amsulwa. Ulirhamncwa eliya kubulala kwakhona. Ndiyayichasa ingqawule katata.
UMichael Carson, oneminyaka engama-32, nomfazi wakhe, uSuzan, owaboniswa ngoAprili 29, 1983, bazityand’ igila ngokubulala abantu ababini ukongezelela kwityala lokubulala abatyholwa ngalo. Izivumo zabo zeza kudliwano-ndlebe lweeyure ezintlanu namapolisa neentatheli zeendaba. (Ifoto ye-AP / San Francisco Chronicle / Vince Maggiora) AKUKHO UKUTHENGISWA
Izinto ezenziwa ngabaGqirha Ababulali zabhalwa kwincwadi kaRichard D. Reynolds ethi Cry For War (Squibob Press 1987).
UMichael noSuzan bavuma ityala lokubulala umdlali weqonga uKeryn Barnes, umchweli uClark Stephens kunye noJon Hellyar, owayebakhwelise emotweni yakhe xa babekhwela inqwelo-mafutha. UStephens, owayekhe wahlala eSan Clemente, wadutyulwa wafa kwaye umzimba wakhe watshiswa kwifama yeembiza eHumboldt County. Indawo yokufa kukaStefano yayibizwa ngokuba yiNtaba Yokubulala emva kokuba iiCarsons zivume.
UBarnes wabethwa ngepani yokuqhotsa waza wahlatywa izihlandlo ezili-13. UHellyar wayeqhuba iiCarsons kufuphi neNapa xa uSuzan waqala ukumhlaba. Emva koko uMichael wamdubula.
UDan Hellyar, umntakwabo wexhoba uJon Hellyar, uthe akakholelwa ukuba ibhodi yengqawule iya kumkhulula uMichael Bear Carson kuba khange abonakalise kuzisola.
Ukuba wayenokuzisola, angasazisa loo nto kuthi, utshilo uHellyar. Kodwa akenzanga.
Ukuvumela uMichael ukuba aphume inokuba sisigqibo esingalunganga, utshilo uHellyar.
Ibiya kuba kukugqwetha ubulungisa, watsho. Umntu onjalo makangaze aphume.
Isibini esingumbulali saba nenxaxheba kwiinkomfa ezintathu zoonondaba ngowe-1983. Babeneenkolelo zonqulo ezingaqhelekanga kunye nobomi bobugxwayiba obuzaliswe kukusebenzisa iziyobisi. Amapolisa afumene ubungqina bokuba mhlawumbi ajolise kuMongameli uRonald Reagan kunye noGov. Jerry Brown kwiinzame zokubulala (nangona zingenziwanga).
Unoluvo lokuba unokubulala abantu ngengqondo yakhe, utshilo uJenn Carson ngoyise.
UJenn nonina babehlala ezimele iminyaka emihlanu, behlala eYorba Linda, eDana Point, eSan Juan Capistrano naseSan Clemente.
Wathi umama wakhe wachaza ukuziphatha kukayise ngolu hlobo: UTata wayegula. Wenzakalisa iqela labantu kwaye uya entolongweni.
Umbuzo wakhe: Ngaba aba bantu bafile?
Impendulo yaba nguewe.
Sizithatha njengamaxhoba esibini, utshilo. Siziva sisoyika.
UJenn uthe ebenamaphupha amabi ukususela xa wayeneminyaka eli-10 ubudala. Wayephupha edibana noomama bamaxhoba kayise kwaye azame ukubawola. Okanye, wayenokuphupha ngokubulala nobundlobongela.
Kangangeminyaka engama-30, uyise wayembhalela iileta. Uninzi lwabo lunethemba kwaye lufudumele, utshilo.
Ngo-1998, waya kwiNtolongo yaseFolsom ukuze amtyelele. Uthe wayehlala no-Erik Menendez (ogwetywe kunye nomntakwabo uLyle ngokubulala abazali babo) kunye namalungu e-Billionaire Boys Club.
Bendifuna ukuvalwa, utshilo. Bendifuna ukuvalelisa.
Akazange ahambe eziva kamnandi emva kokubona uyise.
Wayezama ukudlala inkohliso yakhe ngam, utshilo uJenn. Waqhaqha umntu wamtshisa. Ebethethela phantsi. Akazisoli nangantoni na ayenzileyo.
UJenn ulandele umsebenzi kayise entolongweni ngokusondeleyo kangangoko anako. Uthe wala ukuthabatha inxaxheba ngethuba lokugqibela lokuxoxwa kwetyala lakhe lengqawule ngo-2015. Kodwa ngeli xesha, kulindeleke ukuba avule ityala lokuba makakhululwe. Kwelona tyala lika-Suzan lengqawule lakutshanje, wabethwa ngempama ngeminyaka eli-15 eyongezelelekileyo.
UJenn uthe utata wakhe wayengunoncwadi wasentolongweni kunye nomfundisi. Unesifo sikaCrohn, kwaye unokuxoxa ngobuthathaka bezonyango, utshilo.
Ulibanjwa elingumzekelo, utshilo uJenn. Kwaye unomtsalane.